Uncategorized Archives - Page 327 of 330 - Sainpwar
[ November 26, 2021 ] တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်လာတဲ့ အမျိုးသမီး လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်သီရိရတနာ	KNOWLEDGE
၂၀၂၁ခုနှစ် သောကြာသားသမီးများအတွက် (၁)နှစ်စာကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့်ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက်သောကြာသားသမီးများ၏ (၁)နှစ်စာကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့်ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ သောကြာသားသမီးများ ယခုနှစ်အပိုင်းအခြားမှာ အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများတွင် အလုပ်အကိုင်များပွင့်လင်းလာပြီး အလုပ်များစွာလုပ်ရတတ်ပြီး အလုပ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီချိန်မှာအလုပ်ဟာ အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်နေပါသောကြောင့် မလွဲမမှားဘဲ စည်းရှိရှိနဲ့ လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများဟာ ဒီနှစ်အပိုင်းခြားမှာ အထက်လူကြီး၏ မျက်နှာပေးခံရခြင်း| ရာထူးတိုးပေးခံရခြင်းများဖြစ်တတ်ပြီး ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း မနာလိုမှုများဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တာလုံးအတွက် သောကြာသားသမီးများဟာ အရင်နှစ်များက ဆုံးရှှုံးသွားသော ငွေးကြေး၊အလုပ်အကိုင်များ ပြန်လည်ဦးမော့အစဉ်ပြေလာနိုင်မယ့်နှစ်အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအသစ်များ စတင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ခါဖြစ်သည်။ဝေးကွာနေသော သူငယ်ချင်း|မိတ်ဆွေဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးဘုရားဖူးခရီးသွားရခြင်းများ ကြုံတွေ့ပါမည် […]
မႏၲေလးၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္းမွာလာပစ္သြားေသာအသက္၉၀ေက်ာ္အေမႀကီးကိုကူညီဖို႔သြားေမးျမန္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း ညကုန္စိမ္းေစ်းေျမာက္ဖက္လမ္းလယ္ကၽြန္းမွာအေမႀကီးတစ္ေယာက္ကိုသုံးဘီးနဲ႔လာပစ္သြားတယ္ဆိုလို႔…. ကူညီဖို႔သြားေမးျမန္းရာအေမႀကီ:က နားမၾကားလို႔ဘာမွေမးမရပါ။ ေဘးကလူေတြေျပာျပခ်က္အရ အေမႀကီးကအသက္၉၀ေက်ာ္ၿပီး ေန႔လည္ကသုံးဘီးကားနဲ႔လာထားသြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အေမႀကီးညခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးနဲ႔ဒီေနရာမွာအိပ္ဖို႔အဆင္မေျပပါ။ အလင္းေစတမန္အသင္းကိုခ်ိတ္ဆက္အကူအညီေတာင္းထားပါတယ္။ စိုုင္းေနမ်ိဳး ေမာင္ေမာင္ unicode မန္တလေးမြို့ကမ်းနားလမ်းမှာလာပစ်သွားသောအသက်၉ဝကျော်အမေကြီးကိုကူညီဖို့သွားမေးမြန်း မန္တလေးမြို့ကမ်းနားလမ်း ညကုန်စိမ်းစျေးမြောက်ဖက်လမ်းလယ်ကျွန်းမှာအမေကြီးတစ်ယောက်ကိုသုံးဘီးနဲ့လာပစ်သွားတယ်ဆိုလို့…. ကူညီဖို့သွားမေးမြန်းရာအမေကြီ:က နားမကြားလို့ဘာမှမေးမရပါ။ ဘေးကလူတွေပြောပြချက်အရ အမေကြီးကအသက်၉ဝကျော်ပြီး နေ့လည်ကသုံးဘီးကားနဲ့လာထားသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အမေကြီးညချမ်းချမ်းအေးအေးနဲ့ဒီနေရာမှာအိပ်ဖို့အဆင်မပြေပါ။ အလင်းစေတမန်အသင်းကိုချိတ်ဆက်အကူအညီတောင်းထားပါတယ်။ စိုုင်းနေမျိုး မောင်မောင်
မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ကတော့ ရှည်လျားတဲ့အရပ်အမောင်း၊ ယောကျာ်းဆန်ပြီး အနေအထိုင်တည်ကြည်လွန်းတာမို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ဖမ်းစားထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ကတော့ ပြည်တွင်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းကိုသာမကပဲ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဂျပန်၊ လာအိုစတဲ့ အိမ်နီးချင်း အာရှနိုင်ငံတွေဆီမှာပါ အားပေးသူ ပရိသတ် အများအပြားကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိ ထိုးဖောက်အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကသိတဲ့ မြန်မာမင်းသားအဖြစ် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်က ဒီတစ်ခါမှာလည်း မြန်မာပရိသတ်တွေ ဂုဏ်ယူစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကို သယ်ဆောင်လာပြန်ပါပြီ။ […]
နှလုံးအတု တရားဝင်ထုတ်လုပ်ခွင့်ရကာ နှလုံးမကောင်းသူများ နှတုအတုဖြင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရပြီ….
နှလုံးအတု တရားဝင်ထုတ်လုပ်ခွင့်ရကာ နှလုံးမကောင်းသူများ နှတုအတုဖြင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရပြီ ဆေးပညာလောကအတွက် မင်္ဂလာသတင်းတစ်ခု ထပ်မံ၍ကြားရပါပြီ။ ပြင်သစ် ကာမက်စ်အက်စ်အေ ကုမ္ပဏီက ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး နှလုံးတုစက်ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှလုံးအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ဘဲ နှလုံးတစ်ခုလုံးကို အစားထိုးကုသနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးအတုက ပုံမှန်နှလုံးတွေလို အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီး.အားသွင်းစနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီရဲ့ သက်တမ်းနဲ့ အားသွင်းနည်းစနစ်အကြောင်းကိုတော့ ကုမ္ပဏီကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ဒီစီမံကိန်းကို၁၉၉၃ခုနှစ်ကတည်း စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မက် ထရာကုမ္ပဏီက ကနဦးမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မက် ထရာက Air busလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ […]
၂၀၂၁-ခုနှစ် တနလာင်္သားသမီးများအတွက် (၁)နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ
တနလာင်္သားသမီးများ အိမ်တွင်းရေး| လူမူရေးကိစ္စများကြောင့် ခေါင်းကိုက်ရူပ်ထွေးနေရ တတ်ပြီး| မိမိဆန္ဒမိမိ သဘောနဲ့ လုပ်ဆောင်ခွင့် မရပဲ| ထိန်းချုပ်များ စွာတွေ့ကြုံရ တတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်|ကိုယ့်စွမ်းကိုယ်စများ အသုံးချပြီး ကျော်ဖြတ် နိုင်မှသာ အောင်မြင်မှုရရှိမဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါ ။ အလုပ်အကိုင်မှာ ထင်သလောက် အဆင်မပြေပဲ ပြဿနာများ ရူပ်ထွေးနေရ တတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာတွေ တခုလာတိုင်း |ပြဿနာနောက်က အောင်မြင်ခြင်းနှင့် လာဘ်လာဘ ပါလာတတ်တာကို သင်မမေ့ပါနဲ့|ထို့ကြောင့်ြ […]
​လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း သန်း ၁၄၆ သန်းမှ ၆၄ သန်းကြားတွင် ရှိခဲ့သည့်ပန်းပွင့်​လေးအား မြန်မာ့ပယင်းကျောက်ထဲတွင် အကောင်းပကတိအတိုင်းတွေ့ရှိ…..
ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ ႏွစ္ သန္း ၁၄၆ သန္းမွ ၆၄ သန္းၾကားတြင္ ရွိသည့္ Cretaceous ေခတ္ကာလ(လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သန္းေပါင္း ၁၄၅.၅ သန္းႏွင့္ ၆၅.၅ သန္း) က ပန္းမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏အဖိုပြင့္တစ္ခုကို ျမန္မာပယင္းေက်ာက္အတြင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနေရာင္ႀကိဳက္ေသာ ယင္းအဖိုပြင့္ကိုပယင္းေက်ာက္အတြင္း ေအးခဲစြာရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရွိျခင္း ျဖစ္၍ အံ့ဖြယ္တစ္ပါးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဒါဟာ ခရစၥမတ္ ပန္းေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္အလွတစ္ပါးပဲ။ အထူးသျဖင့္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေလာက္ကရွိခဲ့တဲ့ သစ္ေတာရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဆိုတာကိုစဥ္းစားမိရင္ေပါ့။”ဟု ယင္းတကၠသိုလ္ […]
ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ကြီးများကို ချီးမြှင့် ထောက်ပံ့ငွေ တိုးပေးမည်ဟု ဝန်ကြီးပြော…..
ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ကြီးများကို ချီးမြှင့် ထောက်ပံ့ငွေ တိုးပေးမည်ဟု ဝန်ကြီးပြော ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ငွေ တိုးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ရုံးဝန်ကြီးဌာန (၂)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဦးမင်းသူက ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လက်စွဲစာစောင်ကို ပြုစုဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း…. နောင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရမယ့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တွေကို […]
၂၀၂၁ အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ကံအကောင်းဆုံးလများ….
၂၀၂၁ အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ကံအကောင်းဆုံးလများ နှစ်သစ်အစကူးပြောင်းတော့မယ့် 2021 ကာလမှာတော့ နှစ်ဟောင်းက စိတ်ညစ်စရာတွေ ၊ စိုးရိမ်မှုတွေကိုထားခဲ့ပြီး ခြေလှမ်းသစ်တွေစတင်ဖို့ စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားသင့်ပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာလည်း လူတိုင်းမျှော်လင့်နေသလို လုပ်သမျှအရာရာ အဆင်ပြေမယ့် ကံကောင်းခြင်းလလေးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ရာသီခွင်အလိုက် 2021 မှာ ခြေလှမ်းအသစ်တွေ စတင်သင့်တဲ့ ကံအကောင်းဆုံးလတွေကတော့ … Aries: မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့ထိ Aries လေးတွေကတော့ […]
မသန်းစွမ်းဘဝမှာ ကျနော် ကြိုးစားကျော်ဖြတ်ရုံးကန်နေပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ကိုနိုင်
ကိုနိုင္(မဟာေျမ) ရဲ့ ပထမေျခလွမ္းအေမွာင္ကမၻာထဲကလမ္းျပၾကယ္ ေတးေရး…….မင္းဂၽြန္စိုး ေတးဆို………ကိုနိုင္(မဟာေျမ) ဒါရိုက္တာ….စိုးေက်ာ္ေက်ာ္ ေမတၱာ ျဖင့္ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကေသာ အႏုပညာရွင္ အေပါင္းအားေက်းဇူးအထူးတင္ရပါတယ္ခင္ဗ်…… နိုင္ငံေက်ာ္ ေတးေရးဆရာမင္းဂၽြန္စိုး ရဲ့ ေဖးမကူညီမႈျဖင့္ ပရိတ္သတ္ ရင္ထဲ အေရာက္ပို႔ေပးမည့္ သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ကို ဆရာ့ဆီပို႔ေပးၿပီးပါၿပီ…… ေက်းဇူးအထူးတင္ရပါတယ္ဆရာ….. “က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ဘယ္တုန္းကမွ မမွန္းခဲ့ဘူးတဲ့အိပ္မက္ပါဆရာရယ္…….. စာသားေတြကလည္း မရင္းႏွီးေတာ့က်ေနာ္ ၁၅ရက္ေလာက္က်က္ရမယ္လို႔…..က်ေနာ္ထင္ခဲ့တာဆရာရဲ့…. ထူးျခားတာက….အဲဒီသီခ်င္းေတြကို တစ္ရက္ တစ္ပုဒ္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းရခဲ့တာ……ဆရာ ဦးမင္းဂၽြန္စိုးရဲ့ ေစတနာပဲျဖစ္မွာ ဆရာ……. က်ေနာ္ဆရာ့ကို…. ညတိုင္းကန္ေတာ့ၿပီးအိပ္တယ္ဆရာ…..ကိုဟန္ဆက္ေအာင္နဲ႔ […]
ထွန်းကိုကိုအား နာရေးကူညီမှု အသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူးရာထူး ခန့်အပ်လိုက်ပါပြီ
သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ် ထွန်းကိုကိုကတော့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို နာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့အတူပူပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ပရိဟိတ လုပ်ငန်းတွေမှာကြိုးစားလုပ်ကိုင်တဲ့ ထွန်းကိုကိုကို အတွင်းရေးမှုးရာထူးကို ခန့်အပ်လိုက်ပြီ လို့နာရေးကူညီမှုအသင် းဥက္ကဌဦးကျော်သူကတရား ဝင်ကြော်ငြာလိုက် ပါတယ်။ အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခင်အတွင်းရေးမှူးနေရာတွင် ကျွန်တော်၏ ပါရမီဖြည့်ဖက်ရွှေဇီးကွက်ပါဝင်ခဲ့သော် လည်းသူမသည် ယခုအခါ၌ ဘာသာရေးအား အဓိကကျင့်ကြံကြိုးကုတ် လိုသောဆန္ဒဖြင့် အသင်းကြီးအား အကြံပေးBODအဖွဲ့ ဝင်တာဝန်နေရာမှပေးဆပ်ကာယခု၂၀၂၁ခုနှစ်သစ်မှ စတင်ကာမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ကိုထွန်းကိုကိုအားသူမ မှဆန္ဒပြုပေးခဲ့သလို (BOD)အဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့်နေရာပေးခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လစာမဲ့၍ အချိန်ပြည့်စဉ်ဆက် မပြတ်လာရောက်ပေး ဆပ်နေကြသော […]
တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်လာတဲ့ အမျိုးသမီး လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်သီရိရတနာ